ညီလင်းသစ်: A frame atatime: သနပ်ခါး
Posted by ညီလင်းသစ် au 29.7.13
He was cute with thanakar.
Ltns thar thar..
သားကလေး ဓါတ်ပုံမှာ လေဘယ်တစ်ခု ထပ်တိုးလေ
မိတ်ကပ် ... အဲ ... မှားလို့
သနပ်ခါး ... ညီလင်းသစ် ဆိုပြီး :)
အရမ်းပူလွန်းပြီး မိတ်တွေထွက်တဲ့ ရာသီမျိုးဆိုရင် တီတင့်တို့ရဲ့ ဖွားဖွားသင်ပေးတဲ့နည်းအတိုင်း ခရေပန်းခြောက်လေးတွေထည့်သွေးပြီးလိမ်းတာကို သတိရတယ် မောင်ညီလင်းရေ...
သဘောကောင်းမဲ့ သားတော်မောင်ရဲ့ ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာလေးကိုမြင်တော့ အဖေရဲ့ ရူပါကို ခန့်မှန်းလိုက်တယ် :D
သနပ်ခါးနဲ့သားသားလေးက ချစ်စရာ...း)
Pls convey my remembrance to thar thar. :)
ဒီမှာလည်း မိုးသာရွာနေတာ ပူတာပါပဲ... အစ်ကိုတို့ဆီမှာတော့ အရမ်းအေးရာကနေချက်ချင်းကြီး ကျစ်ကျစ်တောက်ပူတော့ ပိုခံရတာပေါ့နော်..။ သားသားလေးက သနပ်ခါးလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်..။
ကိုညီရေ ကျမလည်း နေပူတဲ့နေ့ တွေမှာ သနပ်ခါး
လိမ်းလိုက်မှ နေလို့ ကောင်းသွားတယ်။
စာရေးဖို့ အရှိန်ယူနေတား) နောက်တစ်ပူုဒ် သားသား နဲ့ ဆားချက်လိုက်ပြန်သည်ပေါ့လေ ။
ကျနော်လည်း သနပ်းခါးကြိုက်တယ် ခုလည်း အခန်းမှာဝယ်ထားတယ် ညအိပ်ယာဝင်သနပ်ခါးလူးပြီးအိပ်တယ်ဗျ ။
ဒီဘလော့ဂ်ကို မရောက်ဖြစ်တာ ကြာတေ့ သူလေးတောင် လူပျိုပေါက်လေးလို ရုပ်ထွက်လာပြီနော်.... ငယ်ငယ် ကလေးလေးလို ရုပ်မျိုးလေး မဟုတ်တော့ဘူး... ကြီးလာ ထွာလာလိုက်တာ... အရပ်ကြီးလည်း ရှည်လောက်ရောပေါ့.... သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြား ဘယ်ညာလူးထားပြီး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ... သားသားလေးလို့ ခေါ်လို့ မရတော့ဘူး... မောင်လေး ဖြစ်နေပြီ...
C'était agréable de voir un garçon mignon avec sweet smile. Je peux sentir l'esprit birman de cette photo. Merci.
ချစ်ရာလေး..ပြုံးပြုံးလေး .. သဘောကောင်းတဲ့ ရုပ်ကလေးနဲ့
မြန်မာပြည်ပြန်တုံးက သားသား ဆိုက်ကားစီးနေတဲ့ပုံ တော့ သေချာမှတ်မိတယ်..
သနပ်ခါး လူးထားတဲ့ပုံပါသလိုပဲ ... အဲဒါတော့ မေ့တေ့တေ့
သားရဲ.မိခင် မအိမ်သူရော သနပ်ခါးလိမ်းသလားဟင်။
သားရဲ.အဖေ သနပ်ခါးလိမ်းထားပုံရော တင်ဖို.စိတ်ကူးမရှိဘူးလားဟင်။
သနပ်ခါးကျောက်ပြင်သယ်လာတယ်ပေါ.နော်။ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ။
သနပ်ခါး ညီလင်းသစ်... ဟားဟားဟား၊ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ၊ တော်ကြာ.. မိတ်ကပ် အကြိုင်တို့၊ ခင်စန်းဝင်း တို့က မနာလို ဖြစ်နေပါဦးမယ်...၊း))
တီတင့်ပြောမှ သနပ်ခါးထဲ ခရေပန်းခြောက် ထည့်သွေးတာကို သတိရတော့တယ်၊ ဟုတ်တယ်နော်၊ နောက်တစ်ခါ ခရေပန်းရရင် အဲဒီလို စမ်းကြည့်ဦးမယ်၊ သားကိုကြည့်ပြီး အဖေကို ခန့်မှန်းမယ် ဆိုရင်တော့ တီတင့် ကွက်တိကို မှန်မှာ သေချာတယ်..၊းD
တင်ပါ့...၊ တီတင့်က အင်မတန် စကားပြောတတ်တယ် ဘုရား...၊း)
Sure...!! I'll tell him without fail. :)
ဟုတ်တယ်..၊ အမေတို့လည်း ပြောတယ်၊ မိုးသာ ရွာနေပေမယ့် ပူတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း...၊ ရာသီဥတုတွေလည်း မမှန်တော့ပါဘူး ညီမရာ...၊
ဟုတ်တယ်နော် အစ်မ၊ အာရှမှာဖြစ်ဖြစ် ဥရောပမှာဖြစ်ဖြစ်.. သနပ်ခါးကတော့ သနပ်ခါး ပါပဲလေ၊း)
ဆားချက်တာ မဟုတ်ရပါဘူး ညီရ..၊ ဓါတ်ပုံဟာလည်း အနုပညာပဲ မဟုတ်လား..၊း) ညအိပ်ရာဝင်မှာ သနပ်ခါးနံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ အိပ်ပျော်သွားရတာ မိုက်တယ်နော်...၊း))
အဲ.. နှုတ်ခမ်းနီတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ သူ့ နှုတ်ခမ်းက အဲဒီလို နဂိုနီပါပဲ..၊
ဟော.. ပျောက်နေတာ ကြာပါရော့လား၊ ဘယ်လိုကနေ မျက်စိလည်ပြီး ဝင်လာတာလဲ?းP ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတိတရ ရှိသေးတာ ကျေးဇူးပါ ညီမရေ...၊ Merci aussi pour ton compliment! C'est une surprise et un vrai plaisir de lire ton commentaire. :)
အဲ.. ဟုတ်တယ်ဗျ၊ သနပ်ခါး လိမ်းနေတဲ့ တစ်ပုံတော့ ပါတယ်ထင်တယ်၊ နေကောင်းတယ် မဟုတ်လား? လာလည်တာ ကျေးဇူးနော်...၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်ကနေ ကျောက်ပျဉ်အသေးလေးတစ်ခု သယ်လာခဲ့တယ်၊ သားရဲ့မိခင် မအိမ်သူလည်း သနပ်ခါး လိမ်းပါတယ်ခင်ဗျ၊ မလိမ်းရင် သူတစ်ယောက်တည်း အိုက်စပ်စပ်ကြီးနဲ့ အိပ်နေရမှာပေါ့၊းD သားရဲ့ အဖေကတော့ သနပ်ခါးဘဲကျားနဲ့ အင်မတန် လှနေလို့ စာဖတ်သူတွေ လိပ်ပြာမလွင့်စေခြင်း အလို့ငှါ ဆင်ဆာ ဖြတ်လိုက်ရပါကြောင်း...၊းD
ဟော.. ကိုညိမ်း၊ နေကောင်းလားဗျ...? လာလည်တာ ကျေးဇူးဗျာ..၊
ရေကြည်ချမ်းမြ တစ်ပေါက်ကျတည့် မိဘတို့ဝမ်း ငြိမ်းစတမ်းတည်း။ ညီလင်းတို့မိသားစု ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
သားလေးက သနပ်ခါးလေးက ချစ်စရာလေး ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ အလုပ်တွေနဲ့ မအားလပ်လို့ ကွန်မန့်မပေးဖြစ်တာကြာပြီ အစ်ကိုရေ။
မမေ၇ွှစင်ရဲ့ ဘလော့မှာ ကိုညီလင်းသစ် စာတွေမတွေ့လို့ ခုမှဖတ်ရတာ။မမရွှေစင်ရဲ့ .com က ဖွင့်လို့မရတော့လို့ blog spot မှာ ချိတ်ပေးပါအုံးလို့ မမရွှေစင်ကိုယ်စားပြောပေးလိုက်တယ်နော်၊သနပ်ခါးနဲ့ သားသားကိုကြည့်ရင်း ရင်ထဲ အေးသွားတာပဲ။
ကိုညီလင်းသစ် သားလေးက သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်စရာလေးနော် ။
မလေးလည်း မလေးသားလေးကို သနပ်ခါးလေးတွေ လိမ်းပေးရင်း ခွံချွေးဖြစ်တယ်။
အို..သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်စရာ :))